I-Proviron yinto ekhethekileyo ye-anabolic steroid ekujikelezeni imijikelezo | Yenza uhlaza
I-Proviron yinto ekhethekileyo ye-anabolic steroid ekujikelezeni imijikelezo
/Blog/Proviron/I-Proviron yinto ekhethekileyo ye-anabolic steroid ekujikelezeni imijikelezo
ezaposwa ngomhla 12 / 13 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Proviron.
1.Yintoni iProviron? 2.How Proviron isebenza njani?
3.Iziphumo zeProviron I-4.Proviron Iimjikelezo kunye neeSetyenziswa
5.Vviron Ukunyulwa kunye noLawulo 6.Vviron Side Effects
7.Kubani Ukuthenga I-Proviron yangempela ipowder ekhompyutheni?
|.Proviron / iMetrololone Isisiseko:
igama: Proviron / Mesterolone
I-molecular Formula: C20H32O2
Isisindo somzimba: 304.47
Proviron imela enye yeyona endala andbolic androgenic steroids kwimarike. Kwaziwa ngokusemthethweni njenge Mesterolone, ibonakale phantsi kwamagama amanqaku amaninzi ngaphezu kweminyaka, kodwa igama leProviron liye lahlala libalaseleyo. Kuye kwahlala enye ye-anabolic steroid engaqondakaliyo inkohlakalo eluhlaza phakathi kwabasebenzisi be-steroid.
Ngeendlela ezininzi, i-Proviron iyingqayizivele kakhulu anabolic steroid i powder eluhlaza. Ikwabelana ngokunye okufanayo Masteron (Drostanolone) kunye neyure Anavar (Oxandrolone) kunye Winstrol (Stanozolol) kodwa ngokubanzi isilwanyana sawo esithile. Ngomthamo wokusebenza, i-Proviron ayisetyenziswanga ukukhuthaza ama-buildups amakhulu ngobukhulu, nangona ingaba nenjongo ebalulekileyo ngeli nqanaba loqeqesho. Kodwa ke, siya kufumana i-Proviron ibe yinto eqhele kakhulu kuyo zokujikeleza, kodwa kwakhona kwakhona injongo yayo iya kuba yinto ekhethekileyo.
2.How Proviron isebenza njani?
I-Mesterolone yi-dihydrotestosterone (DHT) etholakala kwi-anabolic androgenic steroid. Ngokukodwa i-hormone eguqulelwe i-DHT ehleliweyo eneenkcukacha zokongezwa kweqela le-methyl kwindawo yekhabhoni. Oku kuvumela ukuba i-hormone iphile ngokungena ngomlomo ngokukhusela ngokuxhatshazwa kwe-hepatic. Le yodwa yodwa yomlomo we-anabolic steroid powder eluhlaza ongekho i-C17-alpha alkylated (C17-aa) kodwa endaweni yoko ithwala iqela le-methyl eyongeziweyo. I-Oral Primobolan yile enye eyaziwa kakhulu steroid yomlomo ophethe eli qela le-methyl. Ngelixa iqela le-methyl elidibeneyo liyakhusela ekuhlahleni, ukuhlaziywa ngokupheleleyo kweproviron kuya kuba ngaphantsi kwezona zonke i-C17-aa oral steroids. Ngenxa yalesi sizathu uye wavela ekuthandweni phakathi kweentlobo ezininzi zokuphucula ukusebenza kodwa njengoko siza kubona mhlawumbi kungenakufaneleka.
Iproviron inokulinganisa kwe-androgenic ye-30-40 kunye nesilinganiselo se-anabolic ye-100-150. Zonke izilinganiso ezivela kuyo kwaye zilinganiswa ngokuchasene ne testosterone, ezithatha ukulinganisa kwe-100 kuzo zombini iindidi. Nangona kunesilinganiselo se-anabolic esingaba sikhulu kune testosterone, i-Proviron iya kubonisa iimpawu ezincinci ze-anabolic. Oku kufana kakhulu neHalotestin (i-Fluoxymesterone), ephethe isilinganiselo esikhulu se-anabolic kodwa into encinci ye-anabolic eguquguqukayo. Kwimeko yeProviron, ngelixa i-anabolic eyakhiweyo, i-hormone ye-Mesterolone iguqula kwaye iyancipha kwi-Diol metabolites, ekunciphiseni imisebenzi ye-anabolic. Nangona kunjalo, ukulinganisa kwe-Proviron kunye ne-androgenic ibali elihlukile. Enyanisweni, umsebenzi wayo wokuguqulwa kunye ne-androgenic ubonakala uphakamileyo kunokuba isilinganiselo saso sichaza.
Ngendlela esebenzayo, i-Proviron inempawu ezine eziphambili ezichaza ngokubanzi indlela yokusebenza kwayo. Okokuqala kwaye i-hormone ye-Mesterolone inomsebenzi oqinileyo obophayo kwi-Sex-Hormone-Binding-Globulin (SHBG). Enyanisweni, kubonakala ngathi enye ye-anabolic esteroid eqinile kule nto. Ngokuzibophezela kwi-SHBG, i-hormone enoxanduva elithile lokunciphisa i-testosterone yamahhala, i-SHBG ebophayo iya kuphucula inani lokujikeleza i-testosterone yamahhala. Okubaluleke ngakumbi kumsebenzisi we-anabolic steroid, iya kwenza ipesenteji enkulu yokuthenga i-anabolic steroid powder esetyenzisiweyo efumanekayo kwiindawo ezikhululekile kunokuba ziboshwe. Indlela elula yokuyijonga yi-anabolic steroid ethathayo ibe namandla kunye namandla.
Iproviron nayo inako ukusebenzisana ne-enzyme ye-aromatase, i-enzyme ejongene nokuguqulwa kwe testosterone kwi-estrogen. Ngokuzibophezela kwi-enzyme ye-aromatase, i-proviron inokuthi ikhusele umsebenzi we-aromatase, ngaloo ndlela inikeze ukhuselo kwimiphumela yecala ye-estrogenic. Ngeke kube nefuthe elichasene ne-estrogenic kufuphi nomgangatho wamandla we-Aromatase Inhibitor (AI) kodwa iya kuphawulwa. Ngokuxhomekeke kwimeko yomjikelo umntu owenzayo kunokwenzeka ukuba iProteon inakekele zonke iimfuno zakho zokulwa ne-estrogen.
I-hormone ye-Mesterolone nayo iya kuthwala isithintelo esinamandla esibophelelayo kwi-androgen receptor. Kwakhona oku kuya kukhuthaza ukusetyenziswa kwamanye ama-steroids ukuya kumlinganiselo kodwa kubaluleke kakhulu ukukhuthaza umsebenzi ophuculweyo wokusetyenziswa komzimba ngokusebenzisa ipololysis ngqo. Emva koko sishiywe ngumbandela wokugqibela ojikeleze iProviron njengemithi yokuzala. Le steroid ye-anabolic engagqithisi i-gonadotropins ngokufanayo nakwezinye i-anabolic steroid. Ngoxinzelelo oluncinci kunye ne-androgenicity enamandla kakhulu, oku kuya kuphucula umveliso wesilisa njengoko i-androgens iyimfuneko ukuvuselela i-spermatogenesis. Oku akugcini nje ukwandisa inani lembewu eliveliswe kodwa kakhulu kwaye kubaluleka ngokulinganayo kuphucula umgangatho wesilisa. Ngaphambi kokuba siqhube phambili siqonda iproviron inako ukucima i-gonadotropins, kodwa kukho umgca omele uweleke ukukhutshwa okuphawulekayo ukuphazamisa umveliso wesilisa. Oku kuya kuba nengqiqo xa sitshona kwisigaba sempembelelo.
Ngaphandle kwembuzo ixesha elifanelekileyo lokusebenzisa i-Proviron liya kuba ngethuba lokunquma. Le steroid inekhono lokubonelela ngenye imiphumo enzima efana ne-Masteron, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba iziphumo ezinzima zenye i-steroids ziya kuphuculwa. Emva koko sijonga ingqungquthela yayo eqinileyo kwi-androgen receptor, eyokwenza ukuba umntu atshise amanqamzimba omzimba kwizinga eliphezulu kakhulu. Ukusuka apha kufuneka sicinge nge-anti-estrogen Impembelelo yeProviron. Oku kuya kuqinisekisa ukuba umntu akancinci ukugcinwa kwamanzi kwaye njengoko kuxutyushwa, kuxhomekeke kwisijikelezo esipheleleyo, kunokusichasisa imfuneko yokulwa ne-anti-estrogen. Emva koko siphinde sishiywe ngokuphuculiswa kwe-testosterone yamahhala. Oku kunokuba luncedo xa amanqanaba e-testosterone ephantsi kakhulu kweli nqanaba benzisa i-anabolic steroid. Enyanisweni, ngomjikelezo ophantsi we testosterone oquka ezinye i-anabolic steroid, singaqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba iziphumo ezipheleleyo ziya kuba zikhulu kumntu obandakanya iPviron xa kuthelekiswa nomntu ongenalo. Ekugqibeleni, inzuzo eyinhloko yenkxaso-siseko yonyuka kunye ne -rogenicity yezinye i-steroids ezisetyenziselwa ukukhuthaza umzimba onzima nakakhulu. Kufuneka kuphawulwe ngelixa i-Proviron inokuthi ibonelele ngokuqinisekileyo ezi mpawu aziyi kubonakala ngaphandle kokuba uxhomekeke.
I-4.Proviron Iimjikelezo kunye neeSetyenziswa
Ukuba loo Proviron ayinayo i-anabolic steroid kwaye inemiphumo ebuthakathaka kakhulu ye-anabolic, ayisebenzisi ngendlela yemigudu. Kukho endaweni esetyenziswa ngokuqhelekileyo njengombumba oncedisayo, njengesigxina imijikelezo ye-anabolic steroid ukwenzela ukunciphisa okanye ukunciphisa imiphumo ye-Estrogen emzimbeni. Isetyenziselwa iimpembelelo zayo zobuchule ekuphuculeni ukubukeka 'kanzima' kwiphysical zombini ngenxa yeziphumo zayo njenge-anti-estrogen, kwakunye nemiphumo yayo njenge-androgen eqinile.
Xa isetyenziswe njengesixhasi, inokuthi ithathwe ngabadlali bezemidlalo kunye nabadlali bomzimba bonke kulo lonke ubude bemijikelezo kwi-50-100mg ngosuku, ngokungabikho mda wokuba ungasetyenziselwa ixesha elingakanani. Abanye abantu bathanda ukuqhuba iProviron njenge-PCT (iTranscription Cycle Treatment) ukuze kuncitshiswe amanqanaba e-Estrogen kunye nokwandisa ukuzala. Nangona oku kunokwenziwa, kukho izixhobo ezibhetele ngakumbi ezinamandla (kunye nangamandla) kwi-PCT. Xa umngcipheko wokunciphisa iTesttosterone obuthathaka obunobunzima uphonswa kumxube kunye neProviron, kucetyiswa ukuba ugweme ukusetyenziswa kweProviron kwiinjongo ze-PCT ngaphandle kokuba kungekho zikhetho ezikhoyo. Ngethuba elithile apho abantu bazama ukubuyisela amanqanaba abo aseTttosterone okuphela kwendalo, nayiphi na isongelo kungakhathaliseki ukuba ubuncinane kangakanani ukuveliswa kweT Testosterone akufanelekanga kwaye kugwenywe ngazo zonke iindleko.
5.Vviron Ukunyulwa kunye noLawulo
Amanqanaba aseProviron aqhelekileyo ukunyanga i-androgen okanye ukuzala komntu ngokuqhelekileyo iyawa kwi-50-75mg ngosuku lwemihla. Ngokuqhelekileyo i-dosing iyonke ihlukaniswe kwii-2-3 25mg amanani ngosuku. Kwizicwangciso ze-androgen ezingenakulinganiswa, i-dosing iyonke iqala rhoqo kwi-75mg ngosuku kwaye iyancipha kancane kwi-25-50mg ngosuku ngokuxhomekeka kwimfuno yesigulane.
Ngomsebenzi wokusebenza, ama-Proviron amanani ngokuqhelekileyo avela kwi-50-150mg ngosuku. Amadoda amaninzi, nangona kunjalo, aya kufumana i-100mg ngemini ibe yinani elincinci lenzuzo kunye ne-100mg kunye ne-150mg ephumelela kakhulu. Ukusetyenziswa ngokubanzi kuya kuhlala kudlulileyo phakathi kweeveki ze-8-12. Nangona kunjalo, ngomgudu wokuphumelela iphuzu lokunamathela kumjikelezo, tshela ekupheleni komjikelo wekhosi ye-6 yeveki yeProviron ingenza inkohliso.
Kwihlabathi lezonyango lokonyango lwe-androgenicity, i-tablet enye ye-25mg ithathwa kathathu ngosuku (iyonke i-75mg ngosuku) isetyenziswe ekuqaleni kokunyango, ilandelwa ukunciphisa i-dose kamva kumanqanaba okugcina enye i-tablet ye-25mg ngosuku. Xa unyango lwengxaki yokungabikho komntwana, i-dosage efanayo isetyenziswa ngokuqhelekileyo, nangona ezinye izidakamizwa zokukhuthaza izidakamizwa nazo zifakwe kunye neProviron.
Kwimeko yabasebenzi bomzimba kunye nabagijimi, i-Proviron isetyenziswa ngokuqhelekileyo phakathi kwe-50 - 150mg ngosuku ukuba ilawule amanqanaba e-Estrogen, ukunciphisa ukugcinwa kwamanzi (okubangelwa yi-estrogen), okanye ukwandisa ukuzala emva kokuphela komjikelezo.
Nangona i-Proviron ayivunyelwanga ukusetyenziswa kwabesetyhini, amanye amabhinqa kuwo umdlalo kunye nokwakha umzimba uluntu ukhetha ukuyisebenzisa. Kule meko, enye iproviron isilinganiso se-25mg ngosuku sanele ukwenza utshintsho kwimizimba. Oku kufuneka kwenziwe ngaphandle kweeyure ze-4 - 5 ukwenzela ukukhusela imiphumo yokusebenza.
6.Vviron Side Effects
Ngenxa yokuba i-Proviron ivela kwi-DHT-derivative, ihamba nayo akukho mngcipheko nakweyiphi na imilinganiselo yesiphumo se-estrogenic. Enyanisweni, njengoko kukhankanywe ngaphambili, i-Proviron yenza njenge-anti-estrogen ngokusebenzisa umsebenzi wayo njenge-inhibitor ye-aromatase emzimbeni. Oku kunokubangela ukunciphisa iziphumo zecala ye-estrogenic ukusuka kwamanye amaqumrhu ngokunciphisa amanqanaba eplasma e-Estrogen. Uphando luye lwabonisa ukuba ngenxa yale mpembelelo yeProviron, isetyenziswe ngempilo kwonyango lwe-gynecomastia kunye neengcambu zebele ngenxa yobume bayo obuqinileyo kunye ne-anti-estrogenic.
Ngenxa yokuba i-Proviron ngokuyinhloko i-androgen, ihamba nayo ingozi nemiphumela yecala ye-androgenic, kwaye zichazwe ngakumbi ngamanani aphezulu. Imiphumo ye-proviron kunye ne-androgenic ibandakanya: ukwanda kwesikhumba seoli (ngenxa yokuveliswa kwe-sebum production / secretion), ukunyuka kweenwele zobuso kunye nokunyuka kweenwele zomzimba, kunye nokwanda komngcipheko wokubangela i-MPB (i-Pattern Pattern Baldness) kulabo abanezifuzo ezibuhlungu okanye ezixhomekeke kuyo. Abasetyhini banamathele ekusebenziseni i-Proviron, okuyiyo ukuphuhliswa kweempawu zesintu kubafazi (oko kukuthi ukunyuka kwezwi, ukukhula kweenwele zobuso, ukwandiswa kwe-clitoris, njl.). Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngenxa yokuba i-Proviron isele ivela kwi-DHT, iimveliso ezifana ne-Finasteride, i-Proscar, okanye i-Dutasteride aziyi kunceda nantoni na ukunciphisa i-Proviron nemiphumo emibi ye-androgenic.
Ngenxa yokuba i-Proviron ayikho i-C-17 i-alpha alkylated (kunokuba i-methylated kwi-carbon yayo yokuqala), ukuphanda kubonise ukuba ayikwazi ukuvelisa iziphumo ze-hepatotoxic, kwaye iingxaki zesibindi ayinakuze zenzeke ngolu hlobo.
Iziphumo zecala leProviron zibandakanya iimpembelelo ezimbi kwi-cardiovascular system, nangona kunjalo. Izifundo zibonise ukuba i-100mg yeProviron imihla ngemihla kwiinyanga ze-6 ibonise imiphumo emibi kakhulu kwimilinganiselo ye-cholesterol, kokubili ukwandisa i-cholesterol embi (LDL) nokunciphisa i-cholesterol enhle (HDL) yi-65% kunye ne-35% ngokulandelanayo.
Kwakhona kungenzeka ukuba i-Proviron inokuchaphazeleka ekuveliseni ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo (nangona oku kubonwa njengobuthathaka kakhulu). Nangona kunjalo, uphando luye lwabonisa ukuba i-150mg okanye ngaphantsi ngosuku lweProviron ukuba akukho nciphiso olubalulekileyo lweSettosterone. Kwizo zifundo ezifanayo, i-dosage ephezulu (300mg okanye ngaphezulu ngosuku) kubangele ukunciphisa amanqanaba e-Testosterone.
7.Kuphi ukuthenga i-Proviron yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi ?
Iproviron ayikho into esinokuyibiza ngokugqithiseleyo i-anabolic steroid enamandla kwaye asikwazi ukuyibeka kwinqanaba elifanayo lokuba sininzi nezinye i-steroids. Nangona kunjalo, oku kuseyona inzuzo kakhulu ye-anabolic steroid. Akunakulungeleli ngendlela yendabuko esivame ukujonga ngayo i-anabolic steroid. Oku kunzima kwabaninzi ukuba bamkele, njengemibhobho yesigidimi, ngelixa baninzi baninzi baye bagxotha abanye ukuba babe nembono engafanelekanga ye-anabolic steroid. Ngandlela-thile, aba bantu banetyala njengesihlwele-anti-steroid xa kuziwa ngcaciso engafanelekanga. Ngenhlanhla kuwe, akufanele kusayi kuba yingxaki xa kufike kwiProviron.
Ukuba isetyenziselwa iinjongo ezifanelekileyo kunye nokuqonda ihomoni, i-Proviron inokuguqula amaninzi akho. Ingaba oku kuya kuba kukuphela konke okubonayo utshintsho olukhulu olufunyenweyo? Mhlawumbi akunjalo, kodwa iya kunika iingenelo abanye ababenokuthi bangakwazi ukuzenza kunye nokujikeleza umjikelezo wakho ngendlela eya kuba nzima ukuyibetha.
Unokufumana ininzi yeproviron (Mesterolone) umthombo wempuphu ekhompyutheni, kodwa kunzima ukuthenga i-Proviron yangempela (iMesterolone) ekhompyutheni ekhompyutheni. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthengela iProviron (Mesterolone) izinto ezibonakalayo kwi-intanethi, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
I-Primobolan yindlela esetyenziswa kakhulu kwi-anabolic steroid ekunqumeni imijikelezo ye-steroid	U-Anavar ungenye ye-steroid yokusika engcono kakhulu esetyenziswa ngamadoda nabasetyhini